मौन अवधि भोलि राति १२ बजेबाट सुरु हुँदै, के गर्न हुँदैन ? « epurwa
मौन अवधि भोलि राति १२ बजेबाट सुरु हुँदै, के गर्न हुँदैन ?
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७९, सोमबार १४:१४
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ । मौन अवधिमा रानीतिक दल, नेता, उमेदवार, कार्यकर्ता तथा भातृ संगठनले के गर्न हुने र के गर्न नहुने जानकारी दिँदै आयोगले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
भोलि राति १२ बजेबाट मौन अवधि लागु हुँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख ३० गते हुँदै छ ।
मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार–प्रसार कुनै नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन, राजनीतिक दल तथा उमेदवारको पक्ष/विपक्षमा मतदानलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रायोग गरी पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न तथा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न पनि पाइने छैन ।